SLIMBOOK inomutsiridza iyo PRO series | Linux Vakapindwa muropa
SLIMBOOK inovandudza iyo PRO nhevedzano
VaSpanish Slimbook achangobva kuzivisa kuti ichavhura iyo mhuri yePro BASE, malaptop maviri akapera mu14 uye 15.6 inches. Navo iwo akateedzana ePro anovandudzwa, ndiko kuti, iwo kuvandudzwa kweazvino maPRO2 uye EXCÁLIBUR mamodheru. Saka vese vateveri veLinux, yemahara software uye tekinoroji… Unotova nematoyi matsva maviri ekuwedzera kungoro yekutengera!
Iwo malaptop anouya akashongedzerwa ne5th Gen Intel Core i7 uye i8 processor, asi nedonhwe remutengo rakanyanya. Izvo zvinoita kuti Slimbook makomputa ave anodhura zvakanyanya kune ruzhinji rweveruzhinji. Chiteshi cheThunderbolt chete ndicho chakarasika, kurasikirwa kwemaitiro akakwirira uye kuwedzerwa kwezvimwe zvikamu kana zvinhu zvepurasitiki kune iyo 15-inch kesi, asi ichichengetedza mhando uye sevhisi iyo iyo kambani yeValencian yatijairira.
Muenzaniso PRO BASE 14 inoramba ichiiswa mu grey aluminium uye ine mutengo wekutanga we € 599, nekusiyana zvichienderana ne maitiro aunoda iwe, ndiko kuti, rakaomarara dhisiki saizi, mhando processor, huwandu hwe RAM, nezvimwe, izvo zvaunogona kugadzirisa pane iyo Slimbook peji panguva yekutenga. Izvo zvinoitika neiyo inoshanda sisitimu kana distro iyo iwe yaunoda kuve usati waiswa ...
Kana ari PRO BASE 15Ichave nemutengo wekutanga we € 629, zvakare yakaiswa mune grey aluminium uye yakatsvuka vhezheni ichakurumidza kusvika. Iyo epurasitiki zvinhu zvakangowedzerwa mumafuremu ayo uye muzasi yayo yepazasi. Uye batisisa nekuti macurves ari kuuya! Iwe unofanirwa kunyatsoteerera kune LxA neSlimbook's social network, nekuti mumavhiki mashoma vachazivisa mhuri nyowani yemalaptop ePro X. Nezita rayo unogona kufungidzira zvakatimirira ...
Nenzira, Slimbook inosarudzwa kumubairo Vhura Tuzo 2019, vakatokunda muna 2018 ... ko kana tikavabatsira kuhwina zvakare? Unogona kuvhota mune iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SLIMBOOK inovandudza iyo PRO nhevedzano
Maitiro ekuisa Chrome pane RHEL 8 mumatanho maviri akareruka
Google yakaona pre-yakaiswa Backdoor pane Android zvishandiso usati wabva mufekitori